Indlu eqatywe ikalika sinombuki zindwendwe onguNicoletta, Christina, Alexandra
INdlu yoMqolomba esandula ukulungiswa, kanye entliziyweni ye-Oia, eya kuba likhaya lesiqithi lamaphupha akho!
I-Dionyssos Cave House yindlu yomqolomba esanda kulungiswa kwaye ibanzi kakhulu, ngokuyinxenye iqingqwe kubuso belitye lentaba-mlilo. Ime eOia, kwincopho yeliwa kufutshane nenqaba yaseVenetian, apho wonke umntu uhlanganisana khona ukuze abukele ukutshona kwelanga okudumileyo kuka-Oia. Ngenxa yendawo yayo ekhethekileyo, iDionyssos Cave House ibonelela ngembono engathintelwanga yecaldera kunye neentaba-mlilo kwaye kukuhamba imizuzu emi-2 kuphela ukusuka kwisitrato esikhulu saseOia, apho zonke iindawo zokutyela kunye neevenkile zikhoyo.
I-Dionyssos Cave House yindlu enemigangatho emibini enika intuthuzelo efanelekileyo kunye nobumfihlo kwitheko lokuya kwiindwendwe ezisi-8. Inqanaba lokuqala, lelona candelo liphambili lendlu, libonelela ngegumbi lokuhlala elibanzi, indawo yokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elikwabonisa umenzi wekofu weNespresso. Amagumbi amabini okulala nawo abekwe kwinqanaba lokuqala. Igumbi lokulala ngalinye linebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite. Igumbi elinye lokulala libonelela ngezinto ezimbini ezakhiwe kwiisofa ngokunjalo, ezinokulala iindwendwe ezimbini ezongezelelweyo. Ngaphaya koko, inqanaba lokuqala libonisa ithafa elinechibi elishushu lokuntywila kunye nemibono egqwesileyo phezu kwecaldera.
I-terrace esezantsi ikhokelela kwinqanaba eliphezulu le-terrace, ngokudlula kwi-staircase yangaphandle. Kumgangatho ophezulu kukho igumbi lesithathu lokulala elizimeleyo elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite. Eli gumbi lokulala lifikelelwa kuphela ngezitepsi zangaphandle, ezithe nkqo, ngoko ke asinakucebisa igumbi lokulala elithile ingekubantwana abancinci, okanye kwiindwendwe ezisele zikhulile.
Yintoni eyenza iDionyssos Cave House ibe yodwa, ngaphandle kweendawo zayo zangaphakathi ezimangalisayo kunye neembono eziphefumlayo, bubucala obunikezelayo, njengoko kukho amagumbi okulala amathathu azimeleyo, ngalinye linendawo yalo yokuhlambela, kodwa negumbi lokuhlala elibanzi kunye neeterraces ezi-2 ezinkulu, ezifanelekileyo. iindibano zamaqela.
4.96 · Izimvo eziyi-204
Umbuki zindwendwe ngu- Nicoletta, Christina, Alexandra
Izimvo eziyi-2 723
Emva kokuqinisekiswa kogcino-ndawo umamkeli uhlala ekhona kuyo nayiphi na imibuzo okanye amalungiselelo angaphambi kokufika malunga nohambo, uhambo, imisitho ekhethekileyo, njl.njl.
Ukuhlala kwenye yezindlu zikaNicoletta, kuqinisekisa ngenkonzo yomntu kunye nengqiqo, evumela iindwendwe ukuba ziphumle kwaye zibe nokuhlala ngokungakhathali.
UNicoletta ngokwakhe okanye ilungu leqela lakhe uhlala ekhona ngexesha lokuhlala kwakho ukuze akuncede kwaye aqinisekise ukuba uneholide eyonwabisayo.
Emva kokuqinisekiswa kogcino-ndawo umamkeli uhlala ekhona kuyo nayiphi na imibuzo okanye amalungiselelo angaphambi kokufika malunga nohambo, uhambo, imisitho ekhethekileyo, njl.njl…
UNicoletta, Christina, Alexandra yi-Superhost
Inombolo yomthetho: 1167K91001094301
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Ελληνικά, Español